KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး — မြန်မာဌာန
မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမည့် KNU ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု အဖွဲ့ဝင်များအား ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် တေ့ွရစဉ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးနဲ့ ၁၉ ဦးပါ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ဖားအံမြို့မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မော်လမြိုင်မြို့ကို ဆက်လက် သွားရောက်ကာ မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုန်းမြင့် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် မနေ့ကတော့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ပဲခူတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဉာဏ်ဝင်းအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပဲခူးတိုင်းအတွင်းက KNU တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အခြေအနေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
KNU အဖွဲ့ကို ဒု-သမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ညစာစားပွဲနဲ့ ဧည့်ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်တဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မနက်ဖြန်မှာ ဖားအံမြို့ကို ပြန်လည် ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကတဆင့် မြဝတီမြို့ကို ပြန်ကြမယ်လို့ နေပြည်တော် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
Good performance for all karen nations but
should not be trust and insure for this time.We need time to watch.
Very good news. Both sides just keep going on the peace and especially please look for the people.
အခုခ်ိန္ထိ မမွတ္ဘူး။ ျမန္မာလူမ်ိဳးက ဆန္ကြဲစားေနရတာေတာင္မညီညြတ္ဘူး။ငါးစာမပါဘူး ငါးမ်ွားခ်ိတ္ပဲခ်ေပးတာ သြားရည္တမ်ွမွ်နဲ ့ပါသြားၾကကုန္ၿပီ။ လိုခ်င္တာအကုန္ေပးတယ္။ႏိုင္ငံေရးစကားကေတာ့ လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွေျပာေပါ့။လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ၾကံ ့ဖြတ္က(၈၅%)ရွိတယ္။ဘာသြားလုပ္မွာလည္း။ေနာင္ျပင္မွာကိုမေျပာနဲ့လက္ရွိအျမင္ပဲၾကည့္ပါ။လိမ္ေနတာကိုသိရဲ ့သားနဲ ့သမိုင္းကိုေခ်နဲ ့နင္းဖ်က္ေနၾကတယ္။မင္းတို ့ေကာင္းစားသလို အသက္စြန္ ့သြားတဲ့သူရဲေကာင္းေတြအတြက္ ရန္သူနဲ ့အလိုတူသူတိုင္း ၀ဋ္မခံရပါေစနဲ ့။။
ေကာင္းပါတယ္ ေရွ႕ဆက္ျပီးတိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္သူလူထုေတြဘဲနစ္နာမယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိဘဲ
ယခုလိုေဆြးေႏြးျပီး ဆက္ေဆြးေႏြးရင္လည္း သတိႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ဖို႕တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ အစိုးရက